Poivy Save on calling charges အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ပင်မစာမျက်နှာ » အက်ပ်များ » ဆက်သွယ်မှုများ » Poivy Save on calling charges
ဆက်သွယ်မှုများ | 12.7MB
Poivy သည်သင်၏လစဉ်ခေါ်ဆိုမှုစွဲချက်ကို 80% ကျော်ဖြင့်သိမ်းဆည်းရန်သင့်အားကူညီရန်သင့်အားPoivy Mobilevoip app သည် WiFi သို့မဟုတ် 3G ကွန်ယက်များမှတဆင့်စျေးပေါသောသို့မဟုတ်လွတ်လပ်စွာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခေါ်ဆိုမှုများကိုပင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။သင်၏ပုံမှန်အဆက်အသွယ်စာရင်းမှအဆက်အသွယ်မဆိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်အသစ်များထည့်နိုင်သည်။အကယ်. သင်သည် Poivy အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင်၏ poivy client မှအဆက်အသွယ်များကိုလည်းတင်သွင်းနိုင်သည်။
ကိုချက်ချင်းစတင်စုဆောင်းရန်ဤလွယ်ကူသောအဆင့်သုံးဆင့်ကိုလိုက်နာပါ။အခမဲ့ Poivy Dialer App ကို download လုပ်ပါ။2။သင်၏လက်ရှိအထောက်အထားများကို အသုံးပြု. အသုံးပြုသူအမည်သို့မဟုတ်လော့ဂ်အင်လုပ်ပါ။3။ခရက်ဒစ်အချို့ကို0ယ်ယူပါ။
Poivy ဖြင့်ယူရိုချေးငွေကို0ယ်ပြီးနောက်အခမဲ့ရွေးချယ်ထားသည့်နေရာများကိုပထမဆုံးအကြိမ်ခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ဒီရက်ပေါင်း 90 သက်တမ်းကုန်သွားတဲ့အခါမှာမင်းကိုဝယ်ပြီးတဲ့အကြွေးကိုသာစတင်အသုံးပြုလိမ့်မယ်။အခမဲ့မဟုတ်သောနေရာများသို့မည်သည့်ခေါ်ဆိုမှုအတွက်မဆိုသင်၏အကြွေးကိုလည်းသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။အခမဲ့မဟုတ်သောနေရာများတွင်ပင် Poivy ကအနိမ့်ဆုံးနှုန်းထားများကိုစွဲချက်တင်သည်။သငျသညျစျေးပေါဆက်သွယ်ရေးပံ့ပိုးသူရှာမတွေ့ပါ!